Tamin’iny alin’ny zoma iny ihany izy no efa teo am-pelatananay ary narovanay ka natolotray ny polisy ny sabotsy maraina teo sahabo ho tamin’ny 7ora sy sasany maraina”. Io no fampitam-baovao nandritra ny tafa manokana nifanaovana tamin’ny
mpitandro filaminana ao amin’ny zandarimariam-pirenena Fianarantsoa. Nahatratra telo no maty tamin’ilay lozam-pifamoivoizana nahatsiravina teo amin’ny fidinan’i Talatamaty Fianarantsoa. Ny roa maty avy hatrany izay potiky ny fiara tanteraka fa ny iray izay naratra be kosa tany amin’ny hopitaly. 13 ireo mbola tsaboina. Raha tsiahivina, vokatry ny fandaozan’ny hisatra ny zoma hariva tamin’ny 6 ora mahery kely teo no nahatonga ny loza. Fiara
maro sy mpandeha an-togotra no lasibatra. Môtô scooter iray no nanohana farany ilay fiara izay nitsotsotsotso nidina. Araka ny filazan’ireo nanatri-maso dia nanjavona ny mpamilin’ilay fiara vaventy izay navesatry ny entana nefa tsy nisy tako kodiarana ka nahatonga ny loza. Noho ny tahotra ny fitsaram-bahoaka noho izao loza tsy nampoizina izao no anton’ny filefany.